Noix | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana no hiatrehana ny aretina sy ny bibikely manala ny volon'ondry?
Walnut - miely any amin'ny faritra ambanivohitra. Ny voankazo dia avo amin'ny kalôria ary salama. Ny faritra rehetra ao amin'ilay hazo - ny ravina, ny fakany, ny hodi-kazo - noho ny votoatin'ny vitamina sy ny mineraly dia manana fanasitranana. Nampiasaina tamin'ny fitsaboana nentim-paharazana sy nentim-paharazana, cosmetology Ny dibera sy ny menaka mani-pofona dia matetika ao amin'ny latabatra fisakafoana amin'ny sakafo isan-karazany.
Ny tombony sy ny fahasimbana eo amin'ny akorandriaka, ampiasaina amin'ny fitsaboana sy ny cosmetology
Ny voaniho dia ampiasaina ao amin'ny lakozian'ny firenena maro. Ny haben'ny fampiharana ny renirano dia tena lafo - izy dia ampiana zava-mamy, salady, paha-tsakafo, hena, trondro ary voalohany. Ary ny rehetra dia satria loharano vitaminina marobe ary tena ilaina amin'ny vatan'olombelona. Amin'ity lahatsoratra ity dia holazalaza aminao ny tombotsoan'ny nify sy ny voka-dratsiny.
Misafidy ny karazana tsara indrindra amin'ny renirano
Maro amintsika no tia mihinam-bolo. Ity voankazo ity dia efa malaza amin'ny vitaminina sy ny sakafo rehetra. Ankehitriny dia misy karazan-tsakafo maro. Manana ny toetoetrany manokana izy ireo, manandrana, indraindray ny indraindray ny vokatra. Manolotra anao izahay hahafantatra ireo karazana izay tena mifanaraka amin'ny fitomboan'ny firenena.
Ny fanasitranana ireo akorandriaka nokleary
Tsy tsiambaratelo izany hoe zavamaniry tena ilaina izany. Maro ny olona te hihinana ny voankazo matsiro, ary amin'ny fotoana iray ihany, manapo voanjo iray, dia alefa fotsiny ny akorany. Ary zava-poana, satria vokatra tena ilaina koa izany. Hianatra fanazavana misimisy kokoa momba ny akorabato nify sy ny fanasitranana azony ato amin'ity lahatsoratra ity.
Fanondrahana ary manangona rongony ao an-trano
Ny fahadiovana sy ny fitehirizana ny renirano dia tena zava-dehibe amin'ny fiarovana ny kalitaon'ny kernel, izay misy fiantraikany amin'ny vidin'ny entana amin'ny vokatra. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba hanamainana ny akorandriaka amin'ny akora amin'ny fomba samihafa sy any an-trano, ary heverina ihany koa ny fomban-draharaham-pitahirizana ny alam-barotra voaomana.
Ny tombotsoan'ny volombava ho an'ny vatana
Ny Walnut na, araka ny iantsoana azy, dia avy amin'ny Balkans ny reniben'ny mpanjaka, saingy amin'izao fotoana izao dia mbola betsaka kokoa ny haben'ilay lazany. Ity voankazo ity dia homem-boninahitra any Etazonia, Sina ary Azia Afovoany. Ary misy antony maromaro amin'izany: misy fiantraikany goavana eo amin'ny fiasan'ny atidoha, manatsara ny asan'ny fo, mampitombo ny fahatsiarovan-tena, manampy amin'ny fananganana ny hozatra.
Ny menaka nokleary: inona no ilaina ary inona no fitsaboana, izay tsy tokony ampiasaina, fomba fampiasana izany ho an'ny tanjona kosmetika sy medika
Ny fizarazarana nokleary manerana izao tontolo izao dia avy any amin'ny faritra Caucasus sy Central Asia. Ny voankazo dia fantatra tamin'ny Grika fahiny sy ny Romanina. Tao anatin'ny lasa taloha, voankazo iray no noraisina ho voankazo izay manome fahendrena, ary ny solika no ivon'ny toetra mahasoa rehetra. Ny lahatsoratra dia handinika ny firafitra, ny tombontsoa sy ny endriky ny solika amin'ity voankazo ity.
Inona avy ireo sombin-tsakafo mahasoa?
Ny karazana fanasitranana nokleary dia fantatra amin'ny olona maro. Ny voankazo matsiro sy matavy dia ampiasaina amin'ny sakafo sy ny sakafo ara-pahasalamana. Ny menaka nokleary dia ampahany amin'ny lovia maro ary ampiasaina amin'ny cosmetology. Ny akorandriaka misy ireo voankazo dia ampiasaina amin'ny famokarana medikaly nentim-paharazana. Vitsy no mahalala fa ilaina ihany koa ny fizarana izay mampiavaka ny nosy nucleoli.
Ny akora sy ny tombontsoa azo avy amin'ny volombava ho an'ny vehivavy
Maro ny olona mihinana tantely ao amin'ny sakafo noho ny tsirony sy ny sakafo, nefa tsy ny rehetra no mahafantatra ny fomba fiasan'izy ireo eo amin'ny vatana. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia hodinihintsika ny endriky ny akoho, ny tahan'ny isan'andro ny fihinanana azy ireo, ny tombontsoa ho an'ny vehivavy, ary koa ny fananan'ity vokatra ity. Ny firafitry ny Walnuts nify dia tsy manana afa-tsy tsiro tsara, manankarena vitaminina, micro-ary macro-singa izay ilaina ho an'ny vatana, izay tokony horesahina amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Ny fomba hanamboarana hazo avy amin'ny voan-javamaniry
Vitsy ny olona mahafantatra fa mba hambolena zandary ao amin'ny firenena dia tsy ilaina ny mividy voanjo - ampy ny mamafy ny voan'ny hazo. Mba hahalalanao ny fomba hanaovana izany dia vakio ny fanazavantsika. Ny safidin'ny fitaovana famolavolana Na izany aza dia miankina amin'ny fisafidianana ny fitaovana fanangonam-bokatra ny famolavolana hazo avy amin'ny voankazo.
Honey sy ny renirano: inona ny fomba fanangonana zava-mahatalanjona?
Androany, misy fanafody marobe mba hanatsarana ny fahantrana, fisorohana ny hatsiaka. Saingy avy amin'ny zavatra simika samihafa izy ireo, izany hoe, fanafody aty amin'ny aretin-tsaina. Raha mitady solon'ireo vokatra azo avy amin'ny fanafody ianao ary te hampiasa vokatra voajanahary fotsiny, tandremo ny tantely misy tantely, izay azonao ianarana bebe kokoa ato amin'ity lahatsoratra ity.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Noix